China nzima enameln pin mveliso kunye nabenzi | UKumkani
IIBHODI ZE-HELL ENAMEL
Ezi bheji zobhedu zigximfiziweyo zizaliswe zi-enamel ezinzima zokwenziwa, zibanikeza ixesha elide elingenakulinganiswa. Ngokungafaniyo neebheji ze-enamel ezithambileyo, akukho mfuneko yokutyabeka epoxy, ke i-enamel igungxula kumphezulu wesinyithi.
Ilungele ukunyuselwa kweshishini ekumgangatho ophezulu, iiklabhu kunye nemibutho, ezi bheji zibonakalisa ubugcisa obuphezulu.
Uyilo lwakho lwesiko lunokubandakanya ukuya kwimibala emine kwaye unokugximfizwa kuyo nayiphi na imilo kunye nokukhethwa kwegolide, isilivere, ubhedu okanye ukugqitywa kwe-nickel emnyama. Ubuncinci be-odolo yobungakanani zii-100pcs.
Egqithileyo Ipeyinti yelaphu
Okulandelayo: Iphini yoshicilelo lwedijithali
I-Pin yoKhonkco yesiqhelo
Izikhonkwane ze-Enamel ezinzima